UK oo kumanaan dooli shimbiraha cuna kula dagaalantay diyaarado - BBC News Somali
UK oo kumanaan dooli shimbiraha cuna kula dagaalantay diyaarado
9 Maajo 2018
Lahaanshaha sawirka PAULA O'SULLIVAN
Mas'uuliyiinta jasiiradda Georgia-yada Koonfureed oo ku taala badda Atlantic, islamarkaasna hoos tagta boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay in ay cirib tireen kumanaan dooli ah oo jasiiradaas rogay.
Kormeer lagu sameeyay jasiiradda sanado kadib kolkii sanadii 2011-kii la sumeeyay dooliga ayaa lagu ogaaday in xal xabo xitaa oo dooli ah uusan ku nooleyn meesha. Hawlgalka ayaa loo isticlaamay diyaaradaha qumaatiga u kaca si loo laayo, iyada oo diyaaradaha ay dusha ka daadiyeen qalbacyo sunta jiirka ah oo balse cunto loo dhexgaliyay.
Hay'adda arrintan loo xilsaaran ooo lagu magacaabo South Georgea Heritage Trust, taas oo £10m ku maalgalisay mashruuca ciribtirka dooliga ayaa sheegay in dooliga uu halis badan ku yahay noolaha jasiiradaas ku nool oo dhan.
Dooligan waxa uu cunayay nooc shimbiraha ka mid ah oo meesha kaliya ee laga helo ay tahay jasiiradan adduunka oo dhan.
Waxaa la sheegay in maadaamaa jasiiradan aysan lahayn geedo, in shimbiraha ay ku qasbanaadeen in ay ku dhalaan dhulka, taas oo sahashay in dooliga uu ka cuno ilmaha, mararka qaarna shimbiraha waaweynba uu cuno.
Gabadh Dooli uu cunay oo xaaladeeda laga dayrinayo
Jiir baajiyay duullimaad diyaaradeed
Jiir weyn oo noociisu cusub yahay oo la helay
Gabadh xijaabka wax ku xayaysiisa oo isaga baxday barnaamij xayaysiin timaha ah
Waxaa kale oo jiirka loo dhigay dabino , iyada oo loo daadiyay walxo loo mariyay loos, balse sumaysan.
Eeyahay wax uriya ayaa loo isticmaalay daraasadda lagu baarayay in dooliga ay weli wax ka noolyihiin iyo in kale.
Prof Mike Richardson oo hormuud ka ah mashruuca ciribtirka dooliga ayaa sheegay in lixdii bilood ee ugu dambeysay la waayay xitaa hal xabo oo dooli ah, balse meesha kama uusan saarin in uu soo laaban karo.
Tan iyo intii jiirka la laayay, waxaa soo kabanaya tirada shimbiraha oo ku dhawaa in ay cirib go'aan markii hore.
Dhibaatada kale ee dooligan lagu qabo ayaa ah in uu cuno wax kasta oo ay ilkihiisa u gooyaan.
Meelaha dooliga laga baaray waxa ay gaarayaan 1500 goobood oo lagu yaqiinay, iyada oo eeyaha wax uriya ay baareen masaafo dhan 2,420km oo isku wareeg ah.
Lahaanshaha sawirka TONY MARTIN
Image caption 300 tan oo sunta jiirka ah ayaa la isticmaalay
"Eeyaha waxa ay leeyihiin dareen shiirin ah oo layaab leh, waxa ay dooliga ka shiirin karaan iyaga oo dhawr mitar u jira, sidaas darteed waxaan ku kalsoonahay in eeyahay ay heli lahaayeen jiirka haddiiba uu joogo" ayuu intaas ku daray Prof Mike.
Cabsida laga qabo in uu jiirkan soo laabto ayaa waxa uu gaaray illaa heer maraakiibta loo diido in ay kusoo xirtaan dekeda jasiiradda, iyada oo dadka looga soo dajiyo badweynta gudaheeda, laguna soo qaado gaadiid kale, islamarkaasna boorsooyinkooda iyo alaabahooda la baaro.
Maraakiibta dagaalka ee halkaas ku xirata ayaa iyagu si adag loo baaraa.